China Blank Fampianarana makiazy maharitra maharitra 290 * 195 * 3MM mpanazatra tatoazy matevina matevina ho an'ny fanamboarana hoditra sy ozinina | MOLONG
1. Ampio hampiakatra haingana ny haavon'ny tatoazy ireo vao manomboka
2. Fitaovana synthetic, azo antoka, tsy misy akora manimba
3. Mifanentana, fahatsapana tena izy
4. Mety amin'ny mpanakanto vao manomboka sy efa za-draharaha.
5. Manamora ny asan'ny mpanao tatoazy.
Anarana: manazatra hoditra
Haben'ny fijanonana: 290 * 195 * 3MM
Lanja mavesatra: 0,22 kg
Ny tsara indrindra Hoditra fanazaran-tena momba ny tatoazy
Taona vitsy lasa izay, ireo mpanakanto tatoazy dia nanana safidy voafetra tokoa raha ny amin'ny fanazaran-tena momba ny hoditra. Ny maro an'isa dia vita tamin'ny rubber na plastika, tsy dia manome firy amin'ny fomba fiainana marina.
Raha maniry ny hahatanteraka ny asa-tananao ianao dia ho sarotra ny mahazo sary avo lenta miasa amin'ireo fitaovana ireo.
Ankehitriny ny mpanakanto dia manana fahaizana miasa amin'ny hoditra fanazaran-tena amin'ny tatoazy vita amin'ny akora toy ny hoditra sentetika na amin'ny hoditra mihitsy aza.
Na manandrana ny rafitry ny milina tatoazy vaovao ianao te-hiasa amin'ny asanao andalana, ny alokaloka, na ny famenoana, ity fitaovana ity dia nanjary safidy nisafidy ho an'ny artista tatoazy.
Ny hoditra fanao amin'ny tatoazy avo lenta
Soa azo avy amin'ny Hoditra fanazaran-tena momba ny tatoazy
Rehefa afaka mampiasa fitaovana fanazaran-tena izay manahafana ny hoditry ny olombelona tanteraka ianao dia tsy mila manatsara ny fahaizanao amin'ny tenanao, amin'ny fianakavianao, na amin'ny namanao.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny hoditra fanazaran-tena dia mamaly tsara kokoa ny fanjaitra tombokavatsa, ahafahanao mahita tsara ny endrik'ilay endrika amin'ny hoditry ny olombelona.
Napetraka eo amin'ny sandry na ny tongotra ny hoditra mba hahafahanao mahazo mahatsapa ny firafitry ny vatana rehefa manao fanazaran-tena.
Ny takelaka dia manana habe isan-karazany mba hahafahanao manao fanazaran-tena amin'ny lafivalon'ny faritra alohan'ny fanariana azy.
Raha vantany vao manomboka mihatsara amin'ny asanao ianao dia azonao atao koa ny manamboatra ireo hoditra ireo ary manantona azy eo amin'ny rindrina mba hampisehoana amin'ny mpanjifa vaovao ny haben'ny fahaizanao.
Manaova fanazaran-tena amin'ny lafiny roa amin'ireo takelaka ireo:
Previous: Kitapo Cone Kitapo 12 ho an'ny taolana ho an'ny famokarana orona eo amin'ny sofina
Manaraka: Fantsom-panorohana vatan'ny Catheter Body Piercing
Mampihatra hoditra ho an'ny artista tatoazy
Mampiasà hoditra amin'ny tatoazy
Hoditra fanao amin'ny tatoazy silika
Hoditra fanazaran-tena momba ny tatoazy
Malemilemy miofana amin'ny silika malemy ho an'ny taokanto ...
20 * 15 * 0.13cm volomaso manao tazomina hoditra avo ...
39.5 * 30 * 0.3CM A3 habe vita amin'ny fingotra vita amin'ny hoditra vita amin'ny ...
20 * 30 * 0.13cm volomaso manao tazomina hoditra avo ...
Fitaovam-piadiana miaraka amina bandy malefaka Silika Silika Tat ...